Posted by နှစ်ကူး at 6/13/2007 01:41:00 AM
Whatanice! No need to do anything! Just going to sleep and talk with chit chit!
ကုတင်မှာကွေးပီး စာအုပ်နဲ့ကော်ကော် ငြိမ့်ရုံပဲ.. ဒွတ်ပါ့
မိုးရွာလို့ သင်တန်းမသွားရတော့ နှစ်ကူးတို့ စိတ်မကောင်းဖြစ်နေပုံရတယ် :P
အဲဒီနေ့တ ရှင်ဖုန်း ရဲ့ “တယ်လီဖုန်းလေး” သီချင်း ထဲကလို ချမ်းအေးလွန်းတဲ့ မိုးသည်းသောညလေးမှာ တယ်လီဖုန်းလေး အမှတ်မထင် ထမြည်သွားပီး ဂျစ်ဂျစ်နဲ့ Talky ပစ်လို့ နရပါဖူး...။ ကုတင်ပေါ်မှာ စာအုပ်နဲ့ ကော်ကော်နဲ့လည်း ကွေးနေလို့ နရပါဖူးးးး အိမ်အောက်ထပ်မှာ ၀င်လာတဲ့ ရေလှိုင်းလုံးကြီးတွေက ချောင်းသာ ရောက်နေသလိုလို… စိုးရိမ်ရေမှတ်မှာ ရောက်နေလို့ မြင်ရာ ဂေါ်ပြားဆွဲပြီး လုပ်အားပေးလိုက်ရပါဒယ်…
ဟားဟား ... ဒါ့ကြောင့် မိုးထပ်ရွာတာ :P